CLS DC-10-30F bala
umbuzo CLS DC-10-30F bala
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #431 by Gh0stRider203
Nabani na ithuba ukulungele ukwenza bala kum, kuba CLS DC-10? Yeyona bala elula kakhulu kodwa ngenene musa uziva ngathi udlala ngayo, ngokunyaniseka. Ndiye iqhotyoshelwe ishothi kuwo luzakujongeka ngayo, kwakunye umfanekiso kunye neempawu 2 kuyo.
Ukuba kukho umntu wiling ukwenza oku Ndingathanda vuyisa kakhulu
le painkit ifumaneka apha: www.commerciallevel.com/misc/DC10/DC10_paintkit.zip
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #432 by Dariussssss
Ndenze mhlawumbi 100 repaints kuba FlightGear moya sim, kodwa FSX repaints ziphuma league wam. Ngenene ukhangela okulungileyo.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #436 by Colonelwing
Ngokuqinisekileyo umntu kuba nako ukwenza umsebenzi ,,, isivumelwano kakhulu ndithi!
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #437 by Gh0stRider203
Into ngeposi nje omnye umzimba epheleleyo, leyo isiqwenga ikeyiki ... kodwa ke ikho imali enzinzi kakhulu kuyo ngaphezu koko.
Mzimbeni mnye NGOKUPHELELEYO unawo onke esicwangciswe ezahlukeneyo PSD (apho ke PSD KUPHELA ezikule khithi).
le nto eneenkcukacha ikhangeleka ngathi xa UnZip ngayo ... lol prnt.sc/ej7rar
I akanawo umonde kwakhona ukwenza iinyama kwesiqu LOL
Ixesha ukwenza page: 1.145 imizuzwana